Manampy Mpitsoa-ponenana any Eoropa Afovoany ny Vavolombelon’i Jehovah
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Basque Batak (Toba) Catalan Chichewa Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Haoussa Hebreo Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Javaney Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Ourdou Pendjabi Poloney Portogey Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tseky Télougou Valencienne Vietnamianina Yorobà Zapoteky (Andilan-tany)
Fanampiana An’ireo Mpitsoa-ponenana any Eoropa Afovoany
Be dia be ny mpitsoa-ponenana tonga any Eoropa tato ho ato. Avy any Afrika sy ny tany manodidina an’i Israely ary avy any Azia Atsimo izy ireo. Manampy azy ireo ny fikambanana miankina amin’ny fanjakana sy ny mpiasa an-tsitrapo eo an-toerana ka manome sakafo sy fonenana ary mikarakara ny fahasalamany.
Tsy izany ihany anefa no ilain’ny mpitsoa-ponenana fa mila fampiononana sy fanantenana koa ny maro aminy satria mikorontan-tsaina be. Tena te hanampy azy ireo ny Vavolombelon’i Jehovah any Eoropa Afovoany. Henoin’izy ireo tsara ireny mpitsoa-ponenana ireny rehefa mitantara an’izay nihatra taminy, ary ampahereziny amin’ny alalan’ny Baiboly.
Fampaherezana avy ao amin’ny Baiboly
Nanao ezaka manokana ny Vavolombelon’i Jehovah mba hampaherezana ny mpitsoa-ponenana, nanomboka tamin’ny Aogositra 2015. Avy amin’ny fiangonana 300 mahery any Aotrisy sy Alemaina ireo Vavolombelona ireo. Hitan’izy ireo fa faly ireo mpitsoa-ponenana rehefa aseho aminy ao amin’ny Baiboly ny valin’ireto fanontaniana ireto:
Nahoana no be dia be ny olona mijaly?
Inona ny vaovao tsara ao amin’ny Baiboly?
Efatra taonina mahery ny boky sy gazety ara-baiboly nohafaran’ny Vavolombelona any an-toerana tamin’ny biraon’ny sampan’i Eoropa Afovoany, tamin’ny Aogositra ka hatramin’ny Oktobra 2015. Nozarainy maimaim-poana tamin’ireo mpitsoa-ponenana izany.
Tsy natao vato misakana ny fiteny
Tsy mahay afa-tsy ny fiteniny ny mpitsoa-ponenana maro. Ny tranonkala jw.org àry no ampiasain’ny Vavolombelon’i Jehovah rehefa miresaka amin’izy ireo. Misy lahatsoratra sy video amin’ny fiteny an-jatony mantsy ao. Izao no lazain’i Matthias sy Petra, izay miasa an-tsitrapo any Erfurt any Alemaina: “Indraindray izahay manao fihetsika na kisarisary, na mampiasa sary rehefa miresaka.” Mampiasa ny JW Language koa ny Vavolombelon’i Jehovah. Programa fianarana fiteny izy io, ary manampy ny Vavolombelon’i Jehovah hiresaka momba ny Baiboly amin’ny fitenin’ireo mpitsoa-ponenana. Misy koa mampiasa ny programa JW Library mba hamakiana Baiboly sy hampisehoana video amin’ny fiteny samihafa.
Tsy nampoizina ny vokatra azo
Hoy ny mpivady iray avy any Schweinfurt, any Alemaina: “Nitangorona teo aminay ny olona. Boky 360 be izao no voazara tamin’ireo mpitsoa-ponenana tao anatin’ny adiny roa sy sasany. Betsaka no niondrika kely mba hisaotra anay.” Hoy indray i Wolfgang, miasa an-tsitrapo any Diez, any Alemaina: “Faly ny mpitsoa-ponenana fa mba misy mikarakara. Indraindray ry zareo mangataka boky amin’ny fiteny dimy na enina.”
Betsaka no tonga dia mamaky eo no ho eo. Ny hafa indray miverina mba hisaotra an’ireo Vavolombelon’i Jehovah. Hoy i Ilonca, Vavolombelon’i Jehovah any Berlin, any Alemaina: “Nisy tovolahy anankiroa naka boky vitsivitsy. Niverina izy roa lahy rehefa afaka antsasak’adiny, dia nanome mofo. Niala tsiny ry zareo fa tsy nanana afa-tsy izay, nefa mba te hisaotra anay.”
Mankasitraka ny asa an-tsitrapo ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah ny mpanao asa sosialy sy ny manam-pahefana ary ny manodidina. Hoy ny lehilahy iray manao asa sosialy ho an’ny mpitsoa-ponenana 300 eo ho eo: “Misaotra betsaka anareo mijery an’izay hahasoa an’ireto vahiny ireto!” Nilaza ny mpanao asa sosialy ao amin’ny tobin’ny mpitsoa-ponenana iray fa mahafinaritra ny ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah. Tsy misy zavatra atao afa-tsy ny misakafo intelo isan’andro ireo mpitsoa-ponenana ireo, fa ny Vavolombelon’i Jehovah kosa manome boky tsara mba hovakin’izy ireo amin’ny fiteniny.
Nisy polisy anankiroa nanao fisafoana ary nanatona an’i Marion sy Stefan, mpivady any Aotrisy. Nohazavain’izy mivady ny antony anaovany an’ilay karazana asa an-tsitrapo. Nisaotra azy mivady àry ireo polisy dia nangataka boky roa. Hoy i Marion: “Derain’ny polisy foana izahay amin’ny asa ataonay.”
Voamariky ny vehivavy iray any Aotrisy fa eo foana ny Vavolombelon’i Jehovah, vonona hanampy an’ireo mpitsoa-ponenana, na tsara ny andro na ratsy. Manao fanomezana tsy tapaka ho an’ny toby iray io vehivavy io. Nilaza tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah izy indray mandeha hoe: “Marina aloha fa mila omena an’izay ilainy ny mpitsoa-ponenana. Fanantenana anefa no tena ilainy, ary izany mihitsy no omenareo azy.”
Video Amin’ny Fiteny An-jatony